मंगोलियन लुक्स- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
नेपाली फिल्ममा कास्टिङको शैली परिवर्तन भइरहेको छ । चिम्से आँखा, थेप्चो नाक र गोलो अनुहारले पनि चरित्रअनुकूल मुख्य भूमिकामा प्राथमिकता पाउन थालेका छन् ।
जेष्ठ १८, २०७५ सुशील पौडेल
काठमाडौँ — पहिलो नेपाली फिल्म ‘आमा’ २०२२ सालमा बनेको थियो । त्यसमा हिरो र हिरोइन थिए– शिवशंकर मानन्धर र भुवन चन्द । पछि विस्तारै नेपाली फिल्मले हिरोको परिभाषा आर्यन लुक्समा खोज्न थाल्यो ।
हिरो अनुहारको पहिचान सरोज खनाल, भुवन केसी र राजेश हमालहरूले बोक्न थाले भने नायिकामा बसुन्धरा भुसाल, कृष्टि मैनाली, गौरी मल्ल, निरुता सिंह हुँदै रेखा थापा, केकी अधिकारी, प्रियंका कार्कीसम्मको लामो लर्को अझै चलिरहेको छ ।
ठूला आँखा, चुच्चो नाक र लाम्चो अनुहारमा नै नायिकामा हुनुपर्ने ग्ल्यामर देख्ने नेपाली फिल्मले पछिल्ला वर्षमा त्यो प्रचलन तोड्ने प्रयत्न गर्न थालेका छन् । लामो समयदेखि सामाजिक कथावस्तुमा घुमिरहेको नेपाली फिल्मलाई ‘कबड्डी’ मार्फत थकाली समुदायमा छिराए, निर्देशक रामबाबु गुरुङले । थकाली समुदायको संस्कृति र रहनसहनलाई पर्दामा उतार्दा उनले चल्तीकै आर्यन लुक्सका हिरो–हिरोइन लिने गल्ती गरेनन् । दयाहाङ राईको ‘अपोजिट’ मा उनले रिश्मा गुरुङलाई देखाए ।
कबड्डीको ट्रेलर आएपछि भने मूलधारका फिल्म बनाउनेले रामबाबुलाई तर्साएछन् । ‘नियमित फिल्मका गिनेचुनेका अधिकांशले निर्देशकसँगै नायिका पनि गुरुङ अनि फिल्मको लुक्स पनि डकुमेन्ट्री जस्तो छ । कहाँ चल्छ भनेका थिए,’ त्यस बेलालाई सम्झँदै रामबाबु भन्छन्, ‘मैले स्टारडमका लागि भन्दा पनि कथा र चरित्र अनुसार पर्फेक्ट कास्टिङ होस् भनेर रिश्मालाई लिएको थिएँ ।’ तिनै रामबाबुले पछि ‘मिस्टर झोले’ मा दिया पुनलाई लिए ।
डेब्यु फिल्म ‘हँसिया’ मा राजेश हमालको स्टारडम बिकाउन खोजेका निर्देशक मिलन चाम्सले त्यसपछि बनाएको फिल्म ‘वीर–विक्रम’ मा भने नायिकाको भूमिकामा दिया पुनलाई डेब्यु गराए । हिरोमा आर्यन लुक्सलाई चुनौती दिने गरी दयाहाङ राई, विल्सनविक्रम राईहरू चम्किरहेका बेला उनले पनि दयाको अपोजिटमा मंगोलियन लुक्सकै नायिका रोजे । उनको कदमलाई अन्तत: दर्शकले पारित गरिदिए । फिल्म देश, विदेशमा राम्रै चल्यो ।
कुनै बेला थियो, राजेश हमाल वा विराज भट्ट वा निखिल उप्रेतीमध्ये जसको समय र पारिश्रमिकमा कुरा मिल्छ, उसैलाई लिएर फिल्म रातारात लेखिन्थ्यो अनि सुटिङमा गइन्थ्यो । यस्तोमा चरित्रभन्दा पनि कलाकार प्रधान थिए । ती कलाकार जुनसुकै चरित्रमा बलजफ्ती फिट पारिन्थे । यतिबेला नेपाली फिल्ममा कास्टिङको शैली परिवर्तन भइरहेको छ । हिरोमा मात्रै नभई नायिकाका रूप र बनावट पनि फेरिएका छन् । चिम्से आँखा, थेप्चो नाक र गोलो अनुहारले पनि चरित्रअनुकूल मुख्य भूमिकामा प्राथमिकता पाउन थालेका छन् ।
‘प्रेमगीत’ मा पूजा शर्मासँग स्क्रिन सेयर गरेका नायक प्रदीप खड्का त्यसकै सिक्वेलमा अश्लेषा ठकुरी हुँदै ‘लिलिबिली’ सम्म आइपुग्दा जसिता गुरुङसँग देखिए । यसपटक पनि जसिताको डेब्युको जस मिलन चाम्सलाई नै गयो । मंगोलियन युवतीलाई नायिका बनाउने ठूलो जस मिलनलाई नै मिलिरहेको छ । उनले नै दियालाई ‘ह्याप्पी डेज’ मा पनि दोहोर्‍याए भने ‘बोबी’ मा कविता गुरुङलाई डेब्यु गराएका छन् । उनी यो सबै संयोग मात्रै ठान्छन् ।
मिलनले ‘लिलिबिली’ को एउटा प्रसंग उप्काए, जुन फिल्ममा पहिले जसिता र रेविका गुरुङ अनुबन्ध भएका थिए । लन्डनमा खिचिएको उक्त फिल्मका लागि रेविकाको भिसा समस्या भएपछि उनको भूमिकामा प्रियंका कार्कीलाई लिइएको थियो । उनले भने, ‘जसिता र रेविकालाई लिँदा गुरुङ–गुरुङ भयो । जातीय फिल्मको ट्याग लाग्यो भने बर्बाद हुन्छ भन्ने लागेको थियो ।
हामी त रेविकाको थर नै परिवर्तन पो गर्ने हो कि भन्ने निचोडमा समेत पुगिसकेका थियौं । पछि त प्रियंका भइन् ।’
क्षेत्रीय फिल्ममा टाक्कटुक्क देखिइरहेकी भलिबलकी पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी सिपोरा गुरुङ गत वर्ष ‘भुइँमान्छे’ बाट राष्ट्रियस्तरमा नायिकाको छविमा आइन् । त्यसैगरी ‘नोभेम्बर रेन’ बाट साइड रोलमा डेब्यु गरेकी छुल्ठिम गुरुङ गत वर्ष ‘डायरी’ र ‘नेप्टे’ मा मुख्य नायिका बनेर देखिइन् ।
हरेक पक्षमा क्रमभंगता खोजिरहेको नेपाली फिल्मले यतिबेला चरित्र र कथामा पनि विविधता पस्कने प्रयास गरिरहेको छ । तिब्बती शरणार्थीको कथामा बनाइएको ‘नाका’ मा देखिएकी थिन्ले ल्हामोलाई शुक्रबार नै रिलिज भएको ‘हरि’ मा समेत देख्न सकिन्छ भने ‘लालपुर्जा’ बाट डेब्यु गरेकी मिरुना मगरले त्यसयता ‘लाउरे’ खेल्दै ‘रोजी’ मा समेत आफ्नो
स्थान पक्का बनाइसकिन् । आर्यन लुक्सको हिरोइनको ट्रेन्डलाई भत्काउने अनुहारमा ‘रुद्र’, ‘पिँजडा ब्याकअगेन’ र ‘सुश्री सम्पत्ति’ हिरोइन सारा सिर्पाइली, ‘प्रेमगीत २’ की अश्लेषा ठकुरी, ‘लुट २’ की एलिसा राई पनि अघि देखिएका छन् । सम्भवत: यसै वर्ष रिलिज हुने भनिएको ‘गुडबाई काठमान्डु’ बाट पनि माल्भिका सुब्बा आउँदैछिन् ।
आफूले मंगोलियन लुक्सका युवती लिनुलाई मिलन कलाकारको खडेरीको उपज मान्छन् । उनी नयाँ खोज्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । कुनै बेला मंगोलियन लुक्स नबिक्ने फिल्म जस्ता ग्ल्यामर फिल्डमा यतिबेला हालिमुहाली हुन थालेको छ । यसो हुनुमा मिलन कोरियन फिल्मको प्रभावलाई पनि एक कारण मान्छन् । ‘मंगोलियन फेसका हाम्रा कलाकारलाई दर्शकले कोरियन फिल्मका कलाकारको लुक्ससँग रिलेट गर्ने रहेछन् । त्यसैले पनि अहिले चल्न थालेका छन्,’ मिलनले थपे, ‘लिलिबिलीमा जसिताको लुक्सलाई धेरैले
त्यही भने ।’
उपभोक्ताले नै बजार निर्धारण गर्ने भएकाले पनि यतिबेला मंगोलियन लुक्स हाबी हुनुमा धेरथोर बजारको माग पनि देखिएको छ । खासगरी आदिवासी, जनजातिमा आफ्नै समुदायका कलाकार, गायक, संगीतकार खोज्ने चलन छ । फिल्म ‘लुट’ पछि अत्यधिक मागमा परेका दयाहाङ र टीभी सिरियलबाटै तक्मे बुढाको नामले हँसाउँदै आएका विल्सनविक्रमले अभिनेतामा सेट गरेको उक्त मान्यता यतिबेला अभिनेत्रीतर्फ झाँगिएको हो ।
निर्देशक मिलनले थपे, ‘मंगोलियन लुक्सका हिरोइन लिँदा बेलायत जस्ता नेपाली मूलका मंगोलियनकै बाहुल्य रहेका देशमा फिल्मको माग राम्रो हुने रहेछ । ‘वीर विक्रम’ ले त्यहाँ गतिलो व्यापार मात्रै गरेन । डेब्यु गरेकी हिरोइन दियाको समेत खुब खोजी भएको थियो ।’ बेलायतमा गुरुङपछि मगर समुदायको बाहुल्य छ । दिया पुनकै तीव्र खोजी हुने बेलायतमा जसिता गुरुङ अभिनीत ‘लिलिबिली’ ले बम्पर व्यापार गर्नेमा मिलन आशावादी देखिएका छन् । पछिल्लो समयदेखि मंगोलियन लुक्समा फिल्म क्षेत्रले देखाइरहेको आशा पनि यही हो ।
प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७५ ११:१७
काठमाडौँ — चेन्नाई सुपर किङ्सले उपाधि जितेसँगै यसपल्टको इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) पनि आइतबार सकियो । विश्व क्रिकेटकै सबैभन्दा ठूलो र धनी प्रतियोगिता हो, यो । हुन सक्छ, अबका केही वर्षमा यो विश्व खेलकुदकै ठूलो अनि उत्तिकै धनी प्रतियोगिता पनि ।
विश्व क्रिकेटमा आईपीएलले धेरै परिवर्तन ल्याइसकेको छ र अबका केही वर्षमा यसले विश्व क्रिकेटमा अझ ठूलो परिवर्तन ल्याउने पनि निश्चित छ । यसै वर्षको प्रतियोगितामा मात्र केन्द्रित रहँदा प्रतियोगिता कस्तो रह्यो त ? आईपीएल २०१८ लाई यी पाँच विशेषता रहे र यसैको सेरोफेरोमा पूरा प्रतियोगिता आधारित रह्यो । यो विशेषतामा सम्भावनाको अनुमान पनि गाँसिएको छ ।
महँगा खेलाडीले मात्र सफलता ल्याउँदैनन्
इंग्ल्यान्डका बेन स्टोक्सलाई किन्दा राजस्थान रोयल्सको खुसी देखिनसक्नु थियो । तर यो खुसी लामो चलेन । यी स्टार अलराउन्डरका लागि राजस्थानले १९ लाख ६० हजार डलर तिरेको थियो, यसका बदलामा उनले खालि १ सय ९६ रन बनाए अनि लिए १२ विकेट मात्र ।
निकै खर्चालु रहेको राजस्थानले जयदेव उनादकटलाई १८ लाख डलर तिरेको थियो । यी फास्ट बलरले पनि ११ विकेट मात्र लिए, त्यो पनि ९.३७ को रेटमा । किङ्स इलेभन पञ्जावले भने वेस्ट इन्डिजका क्रिस गेललाई खालि ३ लाख १४ हजार डलर तिरेको थियो, तर यी विग–हिटरले ११ खेलमा बनाए, ४ सय ५५ रन । त्यसमा तीन अर्धशतक र एक शतक सामेल थियो ।
अब्बल विदेशी कप्तान
यसपल्टको आईपीएलमा जति टिम सहभागी थिए, त्यसमध्ये विदेशी कप्तानले नेतृत्व गरेको टिम एउटै रह्यो । यो जोडी रह्यो, सनराइजर्स हैदरावाद अनि किवी खेलाडी केन विलियम्सन ।
अस्ट्ेरलियाली कप्तानद्वय स्टिभ स्मिथ र डेविड वार्नरमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि उनीहरूले खेल्न पाएनन् । वार्नरको अनुपस्थितिमा विलियम्सनले अन्तिम समयमा नेतृत्वको अवसर पाए । तर उनी यसमा अब्बल सावित भए । एक त खेलाडीका रूपमा उनको प्रदर्शन उच्च रह्यो, १७ खेलमा ७ सय ३५ रन । उनले अफगानी खेलाडी रसिद खानलाई खुबै राम्रोसँग सदुपयोग गरे । विलियम्सनकै कारण त हो, हैदरावाद फाइनल पुगेको ।
साँच्चै रसिद खान यसपल्टको आईपीएलका सबैभन्दा सफल खेलाडी सावित भए, उनी सुपर–हिरो भएर निस्के । यी १९ वर्षीय लेग स्पिनरले आफ्नो सटिक गुगलीको मद्दतले विराट कोहली र महेन्द्रसिंह धोनी जस्ता ब्याट्सम्यानलाई पनि दबाबमा राखे । उनले १७ खेल खेले अनि लिए, २१ विकेट ।
रसिदको यो प्रदर्शन पनि हैदरावाद फाइनल पुग्नु पछाडिको एउटा प्रमुख कारण रह्यो । त्यसैले त सचिन तेन्दुलकरले पनि भने, यी १९ वर्षीय रसिद क्रिकेटका सर्ट–फरम्याटका सबैभन्दा राम्रा स्पिनर हुन् । उनी मात्र होइन, अर्का अफगान स्पिनर मुजिब उर रहमानका साथै हाम्रो आफ्नै सन्दीप लामिछानेको प्रदर्शनले पनि सबैको मन छोयो ।
नयाँ स्वादको आईपीएल
रुपर्ट मुडरोचको स्टार इन्डियाले यसपल्टको आईपीएलको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो । यसका लागि उसले भारतीय क्रिकेट बोर्डलाई २.५५ बिलियन डलर तिरेको थियो । यसक्रममा स्टार इन्डियाले ६ भाषामा कमेन्ट्री गरेको थियो ।
यसपालि कमेन्टेटर मात्र थिए, १ सय २० जना । त्यसो त एक दशकसम्म टेलिभिजन प्रसारणको अधिकार पाएको सोनीले स्टार
स्पोटर््सलाई झेल्ली गरेको आरोप पनि नलगाएको होइन, तर स्टार स्पोटर््सले यसपल्टको आईपीएल नयाँ स्वादमा पस्किने काम गरेको थियो । यसपल्टको आईपीएल स्टार स्पोटर््सले त्यसरी प्रसारण गरेको थियो, जुन यसअघि अरू कसैले गरेका थिएनन् ।
अबको आईपीएल विदेशमा ?
यसपल्टको आईपीएलको समाप्तिसँगै यसले एउटा प्रश्न पनि छाडेर गएको छ, के अबको संस्करण भारतीय भूमिमा होइन, विदेशमा हुने हो त ? यसपल्टको आईपीएलमा जति पनि खेल भयो, सबैमा सेल–आउट दर्शक आए । तर पनि हुन सक्छ, अर्को संस्करण विदेशमा हुनेछ र यसको कारण हो, अर्को वर्ष भारतमा चुनाव हुँदै छ ।
सन् २०१९ भारतमा महाचुनावको समय हो, त्यसैले हुन सक्छ, आईपीएल २०१९ पनि दुबईमा हुनेछ । यो हुनै नसक्ने तथ्य पनि होइन, आखिरमा यही आईपीएल सन् २००९ मा दक्षिण अफ्रिका तथा सन् २०१४ मा एक तिहाइ खेल यूएईमै भएको थियो । चुनावको समयमै आईपीएल पर्‍यो भने सुरक्षा व्यवस्थाकै कारण आईपीएल सर्नेछ, यसमा शंका नगरे हुन्छ ।